ဒင်းကို စိတ်နာနေဆဲ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Short Story » ဒင်းကို စိတ်နာနေဆဲ
Posted by စဆရ ကြီး on Mar 7, 2014 in Short Story | 17 comments
တင်ပါးတစ်ခုလုံးကြိမ်းသွားသည်။ တစ်ခြမ်းလေးနဲ့ထိုင်လာပါတယ်ဆိုမှ နောက်တစ်ခြမ်းကိုလာထိဖြစ်အောင်ထိသေးသည်။ မုံရွာ-ရေဦးလမ်းတစ်လျှောက် ခြေထောက်ချမရသော အဝေးပြေးကားကြီးကို စီးရင်းနှင့် ကိုရင်စိုင်းတစ်ယောက် တန့်ဆည်သို့ တစ်ရွေ့ရွေ့ချီတက်လျက်သား။
ကိုရင်စိုင်းတစ်ယောက် ညာဘက် ခြေသလုံးကို အသာဆန့်လိုက်သည်။ လက်တစ်ဖက်တွင်ကား ပလိုင်ယာကိုကိုင်လျက်သားနှင့်..။
ဟော… တွေ့ပါလေပြီ။ ဒီသကောင့်သားကို။ ဖြူလွလွနှင့် လူကို စပ်ဖြီးဖြီးကြီးကြည့်နေသည်။ ကိုရင်စိုင်းတစ်ယောက်လဲ ပလိုင်ယာကို ကျစ်ကျစ်ပါအောင် ဆုပ်ကိုင်ရင်း အားပါးတရ ဇွတ်ကနဲ ထိုးထည့်လိုက်သည်။ တစ်ချက်လွတ်သွားသည်။ နောက်တစ်ချက်တွင်မတော့ တစ်ပိုင်းတစ်စပါလာသည်။ နောက်ဆုံးအနေနှင့် အံကိုတင်းတင်းကြိတ်ပြီး ပလိုင်ယာကိုဇွတ်ထိုးထည့်လိုက်ပြီး ဘယ်/ညာလှည့် မွှေလိုက်သည်။
နောက်ဆုံးတွင်မတော့ ပလိုင်ယာအသွားနှစ်ခုကြားတွင် သကောင့်သား ဖြူစုပ်စုပ်စပ်ဖြီးဖြီးကြီးနှင့်ပါလာသည်။ ခြေသလုံးတွင်မတော့ အခေါင်းပေါက်ကြီးဖြစ်ကျန်ရစ်သည်။ တပ်တွင်းဆေးခန်းမှတောင်းထားသည့် မြူဇောပါတ်တီးစကိုထိုးထည့်ပြီး ပလာစတာနှင့် ပိတ်ထားလိုက်သည်။
တစ်ကယ်ပါ။ မနေ့က ကိုရင်စိုင်းတစ်ယောက် ဒင်းကြောင့် အရှက်လုံးလုံးကွဲခဲ့ရလေသည်။
” မောင်စိုင်း… မင်းမှာ အပြစ်ရှိသလား၊ မရှိဘူးလား”
သင်္ချာဆရာမ ဒေါ်ခင်မြတ်လတ်မှ တုတ်တစ်ချောင်းကို ကိုင်ထားပြီးမေးသည်။
ကိုရင်စိုင်းမှာ ၀န်မခံချင်သော်လည်း အထွန့်တက်သည်ထင်မှာ စိုးသည်နှင့်..
” ဟုတ်ကဲ့… ကျွန်တော့်မှာ အပြစ်ရှိပါတယ်ဆရာမ”
” အေး.. ဒါဆို မင်းကို ဆရာမ အပြစ်ပေးရမယ်.. ခုံပေါ်တက်စမ်း”
ရော်… ခက်တော့နေချေပြီ၊ ကိုရင်စိုင်းတစ်ယောက် လူအများကြားအပြစ်ပေးခံရတော့မည်။ တစ်ခြမ်းထဲထိုင်ထားသောတင်ပါးကို ကြွလိုက်ပြီး အတန်းရှေ့ထွက်လိုက်သည်။
“ကိုင်း… ကျောက်သင်ပုန်းကို လက်ပိုက်ပြီး မျက်နှာမူလိုက်”
ဂလောက်ဆို ကိုရင်စိုင်းတစ်ယောက် အနည်းငယ် သဘောပေါက်သွားပြီ။ ပြောရန်လည်း အတော်လေးနောက်ကျသွားလေပြီ။ မတတ်နိုင်တော့။ တင်ပါးလေးကိုသာ အသာလေးမြှောက်ထားလိုက်သည်။ ခြေသလုံးပဲ ဖြစ်ပါစေတော့ပေါ့။ ဆုတောင်းမှားသွားသည်။
အသံနှင့်အတူ ဆရာမလက်မှ တုတ်သည် တင်ပါးသို့ တည့်တည့်မတ်မတ်ကြီးကျလာလေသည်။
နာတော့နာသည်။ ၀မ်းလဲသာသွားသည်။ နည်းနည်းလေးလွဲသွားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ပြီးပြီမှတ်နေတုန်း နောက်တစ်ချက်ကျလာပြန်သည်။ နည်းနည်းအောင့်သွားသည်။
ကိုရင်စိုင်းပုဆိုးတစ်ခုလုံး တင်ပါးတွင် သွေးများနှင့်ရွှဲရွှဲစိုသွားတော့သည်။
“ဟင်” ခနဲ၊ “ဟာ” ခနဲ အသံများနှင့်အတူ အတန်းတွင်းမှ ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများ အာမေဋိတ်သံများနှင့် ပါးစပ်အဟောင်းသားများဖြစ်သွားပြီး ဆရာမ အရိုက်ကြမ်းပုံကို ကြောက်သွားကြသည်။
” အမငီး.. တစ်ကယ့်ကို အတွင်းအားအပြည့်နဲ့ ရိုက်တာပါလား” ဟု
ဆရာမဒေါ်ခင်မြတ်လတ်သည်လည်း လက်တွင် တုတ်ကိုကိုင်ပြီး အံ့အားသင့်စွာဖြင့် ငေးကြောင်ကြည့်နေရင်း နောက်တစ်ချက်ရိုက်ဖို့ပင် မေ့သွားပြီး ကိုရင်စိုင်းပုဆိုးမှ တစ်စိမ့်စိမ့်စီးဆင်းကျနေသော သွေးများကိုကြည့်ရင်း အသက်ရှူဖို့ပင်မေ့သွားလေသည်။ အနှစ်နှစ် အလလက ကြိတ်ကျင့်ကြံခဲ့သော အတွင်းအားကျင့်စဉ်များ လက်စွမ်းပြလေပြီဟု ထင်သွားသောကြောင့်လည်း ဖြစ်ပေမည်။
တစ်နည်းအားဖြင့်လည်း ကိုရင်စိုင်းအတန်းပိုင်ဆရာမ၏ အသည်းကျော် ကိုရင်စိုင်းအား ဒါဏ်ပေးသည်မှာ လက်လွန်ခြေလွန် ဖြစ်သွားသဖြင့် ပုတော့ နုတယ်ဟု အမြဲကြွေးကြော်သော ဆရာမ ဒေါ်ညွန့်ညွန့်နွယ်၏ ပြစ်တင်ပြောဆိုခြင်းခံရတော့မည်ကို တွေးမိပြီး စိုးရိမ်သွားခြင်းလည်းဖြစ်ပေမည်။
ကိုရင်စိုင်းတစ်ယောက်မှာတော့ အတန်းရှေ့ခုံပေါ်တွင် ခြေထောက်မခိုင်တော့ပဲ ညွတ်ကျသွားလေသည်။
ကျောင်းရှေ့တွင် အသင့်စောင့်နေသော ကျောင်းကြိုပို့ KM ကားကြီးဖြင့် ကိုရင်စိုင်းတစ်ယောက် တပ်တွင်းဆေးခန်းသို့ရောက်ပြီး ဆေးထည့်၊ ပါတ်တီးစီးပြီးသည့်နောက် အိမ်တွင် သက်တောင့်သက်သာ နားနေတုန်းရှိသေး မာတာမိခင် ခရီးထွက်ရာနောက် သားကြီး သြရသ အနေနှင့် လိုက်လာရလေသည်။
လမ်းကလဲ အတော်ကြမ်းသည်။ တစ်ခြမ်းမှာ သက်သာကာစရှိသေး၊ နောက်တစ်ခြမ်းမှာ ဒုက္ခပေးလာလေပြန်သဖြင့် ထိုတစ်ခြမ်းမထိအောင် ထိုင်လိုက်လာသော်ငြား ခင်ဦးလမ်းပိုင်းအရောက်တွင်မတော့ လမ်းက မချောတော့သဖြင့် ထိလိုက်၊ မထိလိုက်နှင့် တန့်ဆည်လဲရောက်ရော တင်ပါးတစ်ခုလုံး ဘယ်အရာနှင့်မှ မထိရက်နှိင်တော့အောင်ပင်။
ထိုကစခဲ့သည့် သွေးစုနာ ခုတိုင်အောင် အနာရွတ်ကိုမြင်တိုင်း စိတ်ထဲတွေးမိတိုင်း
ဒင်းကို စိတ်နာနေဆဲ။ ။
ဖတ်ရတာ… အသီးယားထှာ ကိုရင်ရှုံးရယ်…
နိုင်ဂျန်ကားမှာ အဲသည့်လိုရိုက်လို့ကတော့ သေချာပေါက် ဂျေးအောင်းရမယ်…
စေတနာအမှားလို့ ပြောလို့မရဘူး… ဆရာမက Sadism လား မသိ…
ဖြစ်မှ ဖြစ်ရတယ် ကိုရင်ရယ်။
ဒါနဲ့ ဒီပို့(စ) ကို ပတ်ဘလစ် လစ်(စ) ထဲမှာ မတွေ့ဘူးးး
ကျနော်လည်း အခုမှ ဖွင့်လို့ ပွင့်သွားးတာ
တစ်ညနေလုံး ဖွင့်ကြည့်နေတာ မရဘူး
ရေးပြီးမှ စိတ်မလာလို့ Private လုပ်ထားတာပါ
နောက်တစ်ရက်နေပြန်ကြည့်တော့ သများတွေ ၀င်မန့်ထားတာ အံ့အားသင့်စရာတွေ့တာမို့ Publish ပြန်ပြောင်းလိုက်တာပါ။
ဆ ဆရာမ ကြိမ်နဲ့ချ
ကလေးတွေကို အဲလိုဒုတ်နဲ့ရိုက်တာအရမ်းမုန်းတာပဲ.. ကိုရင်စိုင်းတို့များလည်း နှုတ်နှေးချက်.. :)) .. သများဆို တူတော်မောင်တွေ တူမတော်တွေပြောမရရင် ဒုတ်မရှာဘူး.. ပေါင်တွင်းကြောပဲလိမ်ဆွဲတာ.. :loll:
(အင်း…. ကျနော်ဆရာဘွတုန်းကလဲ ကလေးတွေ ဘယ်လောက် နာကြရှာမယ်မသိ)
အောင်မယ်လေး နာလိုက်မယ့်ဖြစ်ခြင်း။ အဲဆရာမလဲ ထန်းသီးကြွေခိုက်ကြီးနင်းခိုက်ဖြစ်သွားထင်ပါ့။ အဟိ သူလဲမှတ်လောက်သားလောက်ဖြစ်သွားမယ်ထင်ပါ့ နောက်ရိုက်ရဲတော့မယ်မထင်
အဲဒီလို ဆရာ့ဂုဏ်နဲ့ မညီတဲ့ မျက်နှာကြီးငယ်လိုက်တဲ့ ဆရာတွေ ကိုယ်တိုင်လည်း ကြုံဖူးတယ်။
ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဂုဏ်တင်တာ မဟုတ်ပေမယ့် သူတကာလို ဆိုးဆိုးသွမ်းသွမ်းလည်း မနေ၊ စာလည်း မညံ့ပါလျှက်နဲ့ မျက်နှာကြီးရာ ဟင်းဖတ်ပါပြီး ကိုယ့်ကိုနှိမ်တာ။
အဖေ့ကို တိုင်ပြောတော့ အဖေကိုယ်တိုင် ကျောင်းကိုလိုက်လာပြီးပြောပေးလို့ ဆရာမက နောက်ထပ်ကိုယ့်ကို အရမ်းကာရော မလုပ်ရဲတော့ဘူး။
အရိုက်ကြမ်းတဲ့ ဆရာမတွေတော့ တွေ့ဖူးပါတယ် ..
အဲ့လို သွေးထွက်အောင်တော့ ဆော်ဖူးတာ မမြင်ခဲ့ဖူးဘူး …
ကိုစိုင်းတို့ ဆရာမ က အတော် ဆိုးတာပဲ …
ဒီလောက် မညှာမတာ ရိုက်တယ်ဆိုတော့ကာ ….
အတော့်ကို သားသမီးချင်း ကိုယ်ချင်း မစာနာတတ်တာပဲ ….
ခုလောက်ဆို ၀င်ရှင်းမှ ဖြစ်တော့မယ်ထင်တယ်.. စာထဲမှာ လှည့်ကွက်လေးနဲ့ ရေးထားတာ ဆရာမ အရိုက်ကြမ်းတယ်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဗျ..
ရှက်လိုက်ထှာ.. တည့်တည့်ပြန်ရှင်းပြရရင် သွေးစုနာက ပေါက်ချင်နေတာ.. အဲ့ဒါတုတ်နဲ့လဲ ထိလိုက်ရော ပေါက်ကွဲထွက်သွားတာကို ပြောချင်တာပါအရပ်ကတို့ရေ
ဆရာမသာ ခုပြောနေတာတွေဖတ်မိရင် ဒီတစ်ခါ တစ်ကယ်အသေဆော်မယ့်ကိန်း
သူလုပ်မှပဲ ဖင်တောင် ယားကျိကျိနဲ.စိတ်ထဲ အောင့်တောင့်တောင့် ဖြစ်လာဒယ်..
အဲဒီ သွေးစုနာ အတော်ဒုက္ခပေးတာပဲအေ…
ဒီပို.စ်ရင်း သတိရလိုက်တာက နောက်ဆို သွေးစုနာပေါက်တာကို ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိအောင် လုပ်ရမယ်ဟေ့.. နို.မဟုတ်ရင် ကိုရင်စိုင်းလို အောင့်သက်သက်ဒုက္ခရောက်ရမယ်မှတ်…
ငယ်ငယ်တုံးက. ကျောင်းအုပ်ကြီးများဆို.. သူ့စိတ်အခန့်မသင့်ရင်….လက်နဲ့နားရင်းအုပ်တာ..။
ကြီးတော့ ပြန်စဉ်းစားမိရင်.. ကလေးတွေခမြာ.. နားအတွင်းကလီဇာတွေများပျက်စီးကုန်မယ်လို့.. သေချာမိတယ်..။
ဒီလို လူတန်းစားခွဲ.. သူတပါးပရိုက်ဗေစီကိုလွန်ကျုးတဲ့.. စရိုက်.. အကျင့်ဆိုးတွေ ဖျောက်သင့်လှပါတယ်..။ ဥပဒေနဲ့ကို.. ပြဌာန်းပြီးပြင်ဆင်ကြရမှာ..။
ပြောရရင်.. မိဘနဲ့သားသမီးကြားလည်း.. ဒီအတိုင်းဥပဒေနဲ့ကာကွယ်ပေးသင့်တယ်..။
( သွေးစုနာနဲ့မဆိုင်ဆိုင်မဆိုင်ဆိုင်.. ကြုံလို့ ၀င်ပြောတာ)
သူကြီးရဲ့ .. ကျွန်တော် တို့ မိဘများတော့ ကျောင်းလိုက်အပ်ရင် ဘယ်လိုပြောသလဲ မှတ်လဲ ..
သူများ မိဘတွေက မကျိုးမပဲ့ရင်တော်ပြီ ဆုံးမ နိုင်ပါတယ် ဆိုပေမဲ့ ကျွန်မသားသမီး ဆိုးလို့ ပြောမရလို့ ကတော့ ကျိုးကျိုးပဲ့ပဲ့ကြိုက်သလို ဆုံးမနိုင်ပါတယ်ဆိုပြီး လိုက်အပ်တာ ..
ဒါပေမဲ့ အဖေ အမေ ကိုယ်နိုက်ကတော့ တော်တော်ရိုက်ခဲတယ် ။
ကျွန်တော့်သားသမီးကျတော့လည်း ကျွန်တော်တို့ မရိုက်ပါဘူး .. မှတ်မှတ်ရရ တစ်ခါ ဆော်ပလော်တီးပေးဘူးတယ် … လမ်းမ လူကြီးမပါဘဲ စက်ဘီး ထွက်မစီးရလို့ ပြောထားတာ မောင်နှမ နှစ်ယောက်ထွက်စီးလို့ ခြေသလုံးကို တစ်ယောက် နှစ်ချက်လောက် ဆော်ခဲ့ဘူးတယ် .. ဒီလောက်ပါဘဲ .. နောက် ဘယ်တော့မှ လူကြီးမပါဘဲ ထွက်မစီးတော့ဘူး ။
ဆိုတော့ ကျွန်တော့် အယူအဆကတော့ ဆော်သင့်ရင်ဆော်ပါ ။ ဒေါသနဲ့ မဆော်ပါနဲ့ ။ တင်ပါးနှင့် ခြေသလုံးလောက်သာ ဆော်ပါ ။ မဆော်ခင် ဘာကြောင့်ဆော် တာလဲ ရှင်းပြပါ ။ နောင်ကို မလုပ်ရ ပြောထားတဲ့ ပြစ်မှုကျူးလွန်ရင် ခုလို ဒါဏ်ခတ်ခံရမယ် ဆိုတာပြောပါ ။
ကြုံလို့ ၀င်ငြင်းတာ …
ယူအက်စ်မှာ အဲလိုမြန်မာမိဘကအဆော်ကောင်းလို့.. ဂတ်ရောက်ရုံးရောက်ကုန်တာတွေ အများကြီးဗျ..။
အ်ိမ်မှာအသာလေးကြိတ်ဆော်လိုက်လည်း.. ဘယ်လိုသိနိုင်သလဲဆိုတော့.. ကလေးကကျောင်းသွားရင်..ဆရာ/ဆရာမတွေက.. ကလေးအခြေအနေကြည့်.. မေးမြန်းပြီးတိုင်ခံရတာ..။
ရီစရာကောင်းတာက.. မြန်မာကလေးတွေက ငယ်စဉ်ဆို..တင်ပါးမှာအစိမ်းကွက်တွေထတတ်တယ်မဟုတ်လား..
(ပြောသာပြောတာ.. သမီးလေးဆို.. သူငယ်တုံးကခဏခဏအဆော်ခံရကြောင်း.. )
ငယ်ငယ်တုန်းက ဥာဏ်မကောင်းလို့ ခဏခဏ လက်ခေါက်တွယ်ခံရတာ များလွန်းလို့လားမသိဘူး အခုချိန် Ball Pen ကိုင်ပြီး ရေးခိုင်းရင် လက်ရေးကတော့ ချာဝန် အဲလေ ဆရာဝန်လက်ရေးပဲဂျို့